Ny ampahadimin'ny mpampiasa dia mandany mihoatra ny 400 euro amin'ny finday | Androidsis
Nifarana izao ny taona 2018 ka orinasa maro no manomboka mamoaka ny fandalinan'izy ireo ny taona. Ny iray amin'izany dia ny Counterpoint Research, izay mamela antsika amin'ny angon-drakitra momba ny tsenan'ny telefaona. Manokana, mandao antsika koa izy ireo miaraka amin'ny tarehimarika momba ny fihetsiky ny mpampiasa. Ahoana ny fahafantarana ny vola laniny amin'ny finday. Zava-misy ifandraisany ao anatin'ny taona iray izay nanjary zava-dehibe ny avo lenta sy ny avo lenta antonony amin'ny Android.
Na dia misy lafiny lehibe aza. Toy ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny varotra amin'ny sehatra mihoatra ny 600 euro dia an'i Apple. Nefa hitantsika fa mandany vola bebe kokoa amin'ny finday ny mpampiasa. Na kely aza ny isan-jato dia mihoatra ny 400 euro amin'ny alàlan'ny fitaovana iray.
Araka ity fanadihadiana Counterpoint ity, 19% amin'ireo mpampiasa ihany no mandany vola mihoatra ny 400 euro hividianana finday. Midika izany fa mpampiasa iray amin'ny dimy, mandany izany vola izany rehefa mividy smartphone. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mijanona amin'ny sarany ambany noho io.
Counterpoint dia naka data avy amin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taon-dasa. Misaotra azy ireo, azo jerena fa ny ampaham-bola (400 euro na mihoatra) maneho ny 22% amin'ny tsena manerantany fotsiny izy io. Ka tsy mahatratra ny ampahefatr'ity tsenan'ny finday ity izany. Na eo aza ny fandrosoana goavambe hitantsika amin'ny avo lenta amin'ny Android, misy safidy maro azo isafidianana.
1 Huawei sy Apple dia miavaka amin'ny sehatra premium
2 Apple dia manjaka amin'ny finday mihoatra ny 600 euro
Huawei sy Apple dia miavaka amin'ny sehatra premium
Ao amin'ity tatitra natolotry ny orinasa ity, Misongadina ny fisian'i Huawei ao amin'ny sehatra finday premium. Ny marika sinoa dia nahitana fahombiazana tamin'ny 2018, miaraka amin'ny firaketana an-tsoratra telefaona nalefa eran-tany. Izy ireo dia efa nametraka ny tenany ho mpanamboatra faharoa lehibe indrindra eran'izao tontolo izao eo amin'ny tsenan'ny smartphone. Amin'ity ampahan'ny 400 euro mahery ity koa dia nanana fitomboana lehibe teo amin'ny varotra izy ireo.
Nahazo 12% ny varotra finday tamin'ny vidiny mihoatra ny 400 euro izy ireo. Raha ny marina, ny mpanamboatra sinoa dia nahavita nampitombo avo roa heny ny varotra raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa. Amin'ny ampahany dia tsy mahagaga izany, satria ny avo lenta an'ny marika dia nahavita fiakarana avo lenta. Ary naharesy lahatra mpampiasa marobe an-tapitrisany manerana ny tsena izy io.
Na dia amin'ity ampahany amin'ny finday premium ity dia Apple izay tsy isalasalana fa manjaka. Ny orinasa amerikana dia mitaky 47% amin'ny varotra amin'ireo finday ireo miaraka amin'ny vidiny mihoatra ny 400 euro. Midika izany fa saika ny antsasaky ny telefaona rehetra amin'ity vidiny ity, na amin'ity fizarana ity dia an'ny Apple. Tarehimarika izay manazava ny toerana manjakazakany ao amin'ilay faritra.
Samsung dia mijanona amin'ny laharana faharoa miaraka amin'ny 22%. Ny haavo avo lenta amin'ny marika Koreana dia nilatsaka tamin'ny varotra tamin'ny taona 2018. Tsy taona tsara io, izay hitan'ny mpampiasa ny tsy fisian'ny fanavaozana amin'ity sehatra ity ao amin'ny orinasa Koreana. Na dia misy aza ny fanavaozana vaovao miandry antsika amin'ny taona 2019, miaraka amin'ny findainy miampy flip amin'ny familiana.
OPPO sy Xiaomi dia manao endrika ivelany ihany koa amin'ity lisitra ity, miaraka amin'ny varotra 5 sy 3%, avy. Ny ambiny amin'ireo mpanamboatra dia mizara 11% amin'ny varotra sisa. Raha ny fahitantsika an'ity sehatra tsena ity dia mifantoka be amin'ny marika vitsivitsy ny varotra.
Apple dia manjaka amin'ny finday mihoatra ny 600 euro
Raha miakatra dingana iray indray isika amin'ny laharana, amin'ny sehatry ny finday mihoatra ny 600 euro, Apple manjaka indray. Ny tena izy dia satria miakatra ny vidin'ny smartphone, hitantsika fa mihamaro hatrany ireo maodelin'ny orinasa amerikana amidy. Ao amin'ny sehatry ny finday mihoatra ny 600 euro dia miisa 61% amin'ny varotra izy ireo.
Ity isa ity mampitombo bebe kokoa amin'ny sehatry ny finday mihoatra ny 800 euro. Hatramin'ity tranga ity dia mitaky 79% amin'ny varotra i Apple. Mazava àry fa mbola lavitra ny Android avo lenta raha mitady hifaninana amin'ny orinasa amerikana amin'io sehatry ny tsena io izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » 19% amin'ireo mpampiasa no mandany maherin'ny 400 euro amin'ny finday